HS:-Tan iyo waxii ka danbeeyey markii dib leyskugu celiyey Mudug iyo Galgaduud oo horey u ahaa hal gobol oo leysku dhihi jiray Mudug ayaa waxaa arintaas siweyn u soo dhaweeyey bulshada degaankaas ku nool. Hadaba wararkii ugu danbeyey ee aanu ka heleyno siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku howlan dhismaha maamulkaas oo sida lagu wado lagu yagleeli doono magaalada Cadaado ayaa hadane waxaa soo baxaya warar horudhac ah oo sheegaya qaabka loo dhisayo maamulkaas.
Dhismaha maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya amaba maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Maamulka gobolada dhexe waxaa loo dhisayaa dhamaan shacabka ku nool dhulkii horey loo dhihi jiray Mudug mudo aan fogeyna laga jaray Galgaduud hadane dib mar kale loogu celiyey.waxuu shirka ugu horeeya ka dhacayaa magaalada Cadaado oo noqotay goobta loo iclaamiyey shirka.Dhaqaalaha shirka waxaa fudueynayo dowlada dhexe iyo beesha caalamka. maamulka waxuu noqon doonaa mid hogaankiisa sare qofka qabanayo uu marayo doorasho muuqata waxaana jira sharuudo la mid ah kuwii lagu xiray musharaxiinta dowlada dhexe markii ay doorashada galayeen oo musharax kasta waxaa laga rabi doonaa qidmo kooban oo lagu bilaabo qasnada maamulka.
Golaha deegaanka ayaa leysku dhinac wadaa iney noqonayaan 61 ilaa 63 mudane oo loogu yeerayo golaha deegaanka kuwaasi oo soo dooran doona gudoomiyaha golaha kedibna dooranaya gudoomiyaha maamul goboleedka.waxaa kale oo Jiri doona gole guurti ah inkasta oo aan tirada rasmiga ah la aqoon waxey u badan tahay in ay noqdaan 21 ilaa ugu badnaa 25 xubnood.
Qaabka doorashada ay u dhaceyso.
Doorashada ma noqoneyso sida lagu wado mid deg deg u dhacda waxaa fursad ku filan la siin doonaa aqoonyahanada uu damaca kaka jiro iyo waliba qurbajoogta daneyneysa maamulkaas iney wax ka noqoto ragii uu damacaas ku jirayna qaarkood waxeyba joogaan baa la leeyahay wadanka gudahiisa halka tiro kalena ay hada jidka ku jiraan oo ay ku sugan yahiin wadanka Imaaraadka carabta sida aan xog horudhac ah ku heleyno.
Maamulka Puntland iyo aragtidiisa ku wajahan dhismaha maamulkaan cusub ee gobolada dhexe?.
Puntland waxaa u dhisan maamul la yiraahdo Puntland State kaasi oo ka kooban gobolkii horey loo dhihi jiray Majeerteeniya amaba markii danbe loo bixiyey gobolka Bari kedibna laga sii jaray Garoowe sidaasina loogu bixiyey Nugaal hadane loogu yeero Puntland.
Marka Soomaalida la sii kala qaado reer Puntland waxaa Mudug ka degan fujo ka mid ah qabiilka Majeerteenka oo la yiraahdo Cumar Maxamud laakinse ma jirto beelo Soomaaliyeed oo Puntland degan amaba Mudug degan oo ay wakiil ka yahiin maamulka Puntland waayo beelaha degan gobolka la doonayo in maamul loo dhiso ee Mudug waxey hada ka hadlayaan qeybteen maamulka ku leeyahay iyo tirada golaha degaanka aan helayo waa meeqa iyo wax la mid ah aragtida guud ee in maamul loo dhiso gobolada dhexe waa ka mideysan yahiin waayo waxey arkaan dib u dhaca shacabkooda ku dhacay ee dhinaca maamulka.
Goobta uu shirka ka dhacayo iyo amaankeeda.
Goobta uu shirka ka dhacayo amaba magaalada Cadaado waa magaalo nabdoon si sahlana loo sugi karo nabadgalyada wafuuda hadii aysan dadka degaanka u dhaqmin qaab mooryaaneed oo aysan dadka martida u ah ee wafuudaa aysan soo dhaweyn waxii ay wataana aysan u nabadgelin oo aan dadka goobaha la dejinayo wafuuda ka shaqeynayo aysan noqon dad xilkas ah oo waxii ay wafuuda uga tagaan meesha ay seexanayaan amaba ku hilaamaan aan la helin meel laga raadiyo oo aysan dadku noqon kuwo aamin ah, wey adkaan doontaa inuu shirku guuleysto.
Guusha shirka waxey ku xiran tahay sida ay u dhaqmaan dadka martida loo yahay iyo sida daacad looga noqdo doorashada oo aan shaqsiga bulshada hogaaminaya lagu dooran reer hebel ee loo eego qodobadan.
1-Shaqsiga hogaaminaya bulshada horta maka soo jeedaa degaanka mana ku dhashay amaba ku barbaaray mudo ku filan ee uu bulshada uu doonayo inuu hogaamiyo ku baran karo?
2- Aqoontiisa maadiga iyo mida diineed sidey tahay siiba dhinaca aqlaaqda, wadan jacelka iyo horumarka laga filan karo iyo wax la mid ah.
3-Cadeeyo hantida uu markaas uu doorashada galayo heysto sida mid muuqata iyo mid aan muuqan si uusan mustaqbalka u lunsan hantida dadweynaha maadaama degaanka maamulka loo sameeynayo uu yahay degaan Bad iyo Beri leh oo ay dhaqaalo badan soo geli doonto bulshada degaanka siba marka la howl geliyo dekeda Hobyo oo iyadu lagu wado iney halboowle u noqon doonto dhaqaalaha gobolka Mudug amaba degaanka loo sameynayo maamulka.
Isku soo duuboo arimaha inta ka dhiman waa farsamo laakinse sida ay hada wax u socdaan gobolada dhexe waxaa ka soo muuqda maamul goboleed walwal badan ku abuuray maamulka Puntland waayo iyagu muhiim uma ahan dhismaha maamulkaan iyo shacabka degaankaas ee helay nidaamka iyo kala danbeynta ee waxaa u muuqda ganacsiga dekeda Bosaaso halka uu ku danbeyn doono hadii maamulkaas la dhiso kediba la howlgeliyo dekeda Hobyo.
La soco wararkeeda danbe iyo dhismaha maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya oo aysan dad badan ogaan jirin in ay shacabka gobolada dhexe sidan muhiim ugu yahiin siyaasada dalka, xitaa beesha caalamka hada ayey ogaadeen waxa Puntland ka qeylisiinayo iney tahay dano u gaar ah ee aysan aheyn iney ka soo horjeedaan dhismaha maamulkan waayo Puntland iyadoo aan maamulkii walito la dhisin ayeyba shuuqday waayo waxuu ahaa maamul lagu waday dacaayad amaba xayeysiin.
· admin on August 12 2014 13:32:34 · 0 Comments · 2000 Reads ·
14,383,737 unique visits